महाभुकम्पमा सहानुभूति समेत नदिने सलमान खान नेपालमा रक्सीको प्रमोशन गर्न आउँदै, टिकटको मूल्य १० हजारसम्म — Riddle Nepal
महाभुकम्पमा सहानुभूति समेत नदिने सलमान खान नेपालमा रक्सीको प्रमोशन गर्न आउँदै, टिकटको मूल्य १० हजारसम्म
२०७२ बैशाख १२ गतेको भूकम्पमा परेर हजारौं नेपालीले ज्यान गुमाए, खर्बाैंको भौतिक सम्पति नोक्सान भयो । त्यतिबेला सात समुन्द्र पारीका फुटबलर मेस्सीदेखि रोनाल्डोसम्मले सहयोगको घोषणा गरे । तर रोटी र बेटीको सम्बन्ध भएका छिमेकी मुलुक भारतका सुपरस्टार सलमान खान भने त्यतिबेला सहयोग नगरेको र नगर्ने घोषणा गरिरहेका थिए ।?
रोनाल्डोले ८० करोड सहयोग गर्दा मेस्सीले ५१ करोड सहयोग गरे । रोनाल्डोले सेभ द चिल्ड्रेन युके र मेस्सीले युनिसेफ मार्फत नेपाली बालबालिकाका लागि सहयोग गरेका थिए । बार्सीलोनाले खेल मैदानमै मौनधारण गर्यो भने रोनाल्डोले नेपाल र पोर्चुगलको झण्डा लिएर फोटो खिचे ।
संसारभरबाट नेपाल र नेपालीको दुःखमा साथ सहयोग प्राप्त भैरहेका बेला भारतीय सुपरस्टार सलमान खानले पनि सहयोग घोषणा गरेको चर्चा शिखरमा पुग्यो । तर सलमानले आफ्नो फेसबुकमा लेखे–हामीले भूकम्प पीडित नेपालीलाई सहयोग गरेका छैनौं र सहयोग गर्ने तत्काल कुनै कार्यक्रम पनि छैन् ।
सहयोग गर्नु नगर्नु खानको व्यक्तिगत अधिकारको कुरा हो । तर उनले सहयोग नगरेको घोषणा गरिरहँदा सहानुभूतिका दुई शब्द समेत खर्चने प्रयास गरेनन् ।
खानले ‘हामी सहयोग गर्न असमर्थ छौं तर नेपाल र नेपाली प्रति आईपरेको विपत्तिमा दुःखी भएका छौं ।’ भन्न सक्थे । तर उनका तर्फबाट त्यति शब्द पनि निस्केनन् । मेस्सी र रोनाल्डोमा मानविय सम्वेदना देखिँदा सलमानले सहयोग नगर्ने घोषणा गरे तर दुःख पनि व्यक्त गरेनन् ।
यतिबेला उनै भारतीय सुपरस्टार सलमान खान रक्सीको प्रमोशनका लागि नेपाल आउँदैछन र हामी नेपाली उनका लागि १० औं हजारको टिकट किन्न तयार भएका छौं । भूकम्पले सिंगो नेपाल शोकमा डुबेका बेला दुई शब्द सहानुभूति व्यक्त गर्न पनि नसक्ने खानका लागि हामी १० औं हजार खर्चन कसरी तयार भयौं ? यो गम्भिर प्रश्न हो ।
विईङ ह्युमन फाउण्डेसन सञ्चालन गरिरहेका सलमानले सहानुभूति समेत नदेखाएका हामी नेपाली आज उनका लागि रक्सीको टिसर्ट लगाएर टुँडीखेलमा जम्मा हुन तयार भएका छौं किन ?- विकासन्युज बाट